version 0.9.7.0 – ကျွနုပ်နှင့်ပတ်လည်တပ်ဆင်ထား, နှင့် SuperProxy alpha
ဇွန်လ 6, 2015 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု2comments
အဆင့်မြှင့်တင် ကျေးဇူးပြု.! ကျေးဇူးပြု, အဆင့်မြှင့်တင် ကျေးဇူးပြု.! ထိပ်ပေါ်မှာအချို့သောသကြားနှင့်အတူနှစ်သက်သော.
ဤဗားရှင်းကို Google proxy ကိုထောက်ခံမှုဖြေရှင်း, သော automated Google ကဘာသာကိုတဖနျအလုပ်လုပ်သွားမှာကိုဆိုလိုတယ်.
ဤဗားရှင်းကိုဒေတာဘေ့စ format ကိုကို update, အရာ wordpress ကိုဆိုလို 4.2 ထောက်ခံသည်, နှင့်သင် ~ လက်ရှိစားပွဲအရွယ်အစား၏ 40% ကိုကယ်တင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်
ကျနော်တို့နောက်ဆုံးတစ် backend ဘာသာပြန်ချက်အယ်ဒီတာတစ်ဦးကနဦးဗားရှင်း, သင်အမှန်တကယ်လူဘာသာပြန်ထားသောထားသောကြိုးကိုပြနှင့်သင်လျင်မြန်စွာအဲဒီပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်ဖျက်အားခွင့်ပြုမည်.
အချို့ကံကောင်းခြင်းနှင့်အတူ, သင်ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ wordpress dashboard အတွက်အဆင့်မြှင့်တင်ရန် option များ. သင် backup လုပ်ထားကြောင်းကိုအကြံပြုပါသည်, database ကိုအဆင့်မြှင့်တင်မှုပြီးစီးထားပြီးနောက်ကျောပြီးနောက်လမ်းမရှိသောင့်အဖြစ်.
မည်သည့် quirks, ပြဿနာများကို, ပြဿနာများ – ကို ကျွန်တော်တို့ကိုပုံစံဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် သင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့တတ်၏.
SuperProxy နှင့်အဘယ်ကြောင့်သင်သည်ဤ enable သင့်ကြောင်းဆိုတာဘာလဲ?
SuperProxy ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ဖြစ်၏ “ကြွယ်ဝသောလျင်မြန် Get” အစီအစဉ်. Hmm…
တကယ်တော့, ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကို web မှ access ကိုဖြန့်ဝေဖို့ခွင့်ပြုပါရန်အဆုံးဆုံမှတ်များကိုအသုံးပြုနေ. ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလမ်းကြောင်းများကိုပေးဆောင်ကြလိမ့်မည်, သင် hosting အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူလျှင်ဒီတော့သင်အသုံးပြုနေတဲ့မဟုတ်ဒေတာ transfer ၏တန်ချိန်များ, ငါတို့သည်သင်တို့ဒီ feature ကိုထောက်ကူသောကယ့်ကိုကြေးဇူးတငျတလိမ့်မည်, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပံ့ပိုးလိမ့်မည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်သင့်ရဲ့နေစဉ်တန်ဖိုးရှိဖြစ်လိမ့်မည်. သူတို့ရရှိနိုင်ဖြစ်လာသကဲ့သို့ငါတို့ဒီအကြောင်းပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဝေလိမ့်မည်.
နှင့် – ကို ChangeLog ၏ကြွင်း:
ထို base64 ကိုက်ညီတဲ့ encoding မြောင်းနှင့်ချက်များစာမျက်နှာများတွင်၏အရွယ်အစားလျှော့ချ
3 Bing ကထောက်ပံ့အသစ်ဘာသာစကားများ
ဒေသခံနေရာတစ်ခု shortcode my_MM
တချို့ download, addon plugins များနှင့်အတူမဟုတ်သောစာသား / json အကြောင်းအရာများကိုကျွနုပ်ကိစ္စများကို၏ဘာသာပြန်ကိုရှောင်ကြဉ်
ထိုပညာရပ်ဆိုင်ရာအမှတ်အသား attribute ကိုကိုထောက်ပံ့, ကျေးဇူးတင်စကားမာကု Serellis
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း directory ကို plugin ကိုမှတချို့ကအထောက်အပံ့
ဒါကြောင့် – ဒီဗားရှင်းကိုခံစားပျော်မွေ့, တစ်လူစိမ်းဖြစ်ဘူး, ကျွန်တော်တို့ကိုသင်တို့အဘို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုသိစေ.
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ, Software ကို Updates ကို အတူ Tagged: ဂူဂယ်လ်ဘာသာပြန်, အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး
version 0.8.5 – ငါတို့သည်လည်းလာအိုကိုထောက်ခံ
စက်တင်ဘာလ 17, 2012 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှုaComment Leave
တစ်ဦးကဖားပြီး mouse ကိုကြိုဆိုလာအို
ကောင်းစွာ, ကိုယ့်သောသူတို့ translate ဘလော့ဂ်ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာသည် Google လာအိုကိုအထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်, လာအို၏တရားဝင်ဘာသာစကား, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့လိုအပ် code ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ဤဘာသာစကားကိုမှထောက်ခံမှုနှင့်အတူမြန်ဆန်စွာလွှတ်ပေးရန် ပြု. ပါပြီ, စကထောက်ခံထားတဲ့ တစ်နာရီဘာသာပြန်စာပေ.
ဗားရှင်းအနည်းငယ်နေ့ရက်ကာလအဘို့ကိုထုတ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်ဒီ post တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလာပြီအတူအစစ်အမှန်ပြဿနာရုပ်ပုံတပုံကိုရှာဖွေခဲ့သည်. ကျနော်တို့ကအသင့်လျော်ဆုံးရုပ်ပုံလွှာသည်အတော်လေးသေချာမသိကြ, ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးကာရံညီ.
အောက်တွင်တင်သွင်း: အထွေထွေမက်ဆေ့ခ်ျများ, သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: ဂူဂယ်လ်ဘာသာပြန်, အသေးအဖွဲ, ပိုဘာသာစကားများ, လွှတ်ပေး
version 0.8.0 – အများအား API များ၏တိုက်ခိုက်ခြင်း
နိုဝင်ဘာလ 29, 2011 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 65 comments
ကောင်းပြီရှေ့ဆက် Google ကကအန္တရာယ်နောက်ဆုံးနေ့၏အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန် API ကို Translate, ကျနော်တို့နောက်ဆုံးတော့အခုအသစ်လွှတ်ပေးရန် compile လုပ်ဖို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်. ဒီအတဗားရှင်းအဟောင်းအားဖြင့်တင်ပြကြသည်ကိုပြဿနာတွေရဲ့ရှည်လျားကာလနောက်တော်သို့လိုက်, အဓိကအားဖြင့်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Google ကအသစ်သောမြင့်မားရှိမည်ဟုယခင်ဗားရှင်းထောက်ခံမှုတောင်းဆိုမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးနေ့မီအသုံးပြုမှုအပေါ်ကန့်သတ်ရှိုးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၏. Google ရဲ့အပြောင်းအလဲကိုလည်း Bing မှဘာသာပြန်ချက် API ကိုတစ် API ကိုကန့်သတ်အစပျိုး, သုံးစွဲသူများအင်ဂျင် switching ခဲ့ကြကတည်းက, Bing မှများအတွက် Transposh ခက်ခဲမိံ API သော့မတန်တဆသော.
ဤအချက်တွင်ကျွန်တော်တို့အစိုင်အခဲဗားရှင်းခဲ့, အရာကိုမလွှတ်တဲ့ကောင်းသောအရာတစုံတခုကဲ့သို့ထင်မှတ်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမ, ကျနော်တို့တချို့တခြားအင်္ဂါရပ်ရှိသည်ခဲ့, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့နောက်ဆုံးတော့မျိုးစုံရှိဝစ်ဂျက်များထောက်ခံမှုကိစ္စကိုကိုင်တွယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် (လွန်းနဲ့ title ရွေးချယ်ခြင်း, yippee!). အတော်လေးဖြောင့်ရှေ့ကိုဟန်? ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမ, ဒီအဖြစ်ကိုကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ widget ကအခြေခံအဆောက်အဦများ၏အဓိက rewritable စေ၏. တကယ်တော့ css ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်ကိုလမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်အတူအတော်လေးများတုံ့ကတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး, အရှိဝစ်ဂျက်ဘာသာစကားမှာပြောင်းလဲမှု၏ server များတိုင်ကြားမည်နှင့်လမ်း (ကျနော်တို့ဆာဗာကိုတစ်ဦးအချည်းနှီး POST ကိုခေါ်ဆိုခယခုမှရှောင်ရှား). ကျနော်တို့နောက်ထပ်ရက်သတ္တပတ်ပြန်လွှတ်ပေးရန်ကျင်းပခဲ့သောအခြားပြဿနာများ၏အစုတခုနှင့်အတူ PHP5.2 နေတယ်ဆိုတာကိုပြဿနာတစ်ခု PHP5.3 အပေါ်သို့ထိ မိ. လဲရန်လုံလောက်သောကံကောင်းဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေစဉ်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ beta ကိုဖြန့်ချိနှင့်အတူတက်ထားပြီးလျှင်, code နှင့်ရှုပ်ထွေးနက်နဲ၏အလွှာအောက်မှာပုန်းကွယ်ခဲ့ကြပြဿနာတွေရှာတွေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်သောသုံးစွဲသူအများအပြားကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်.
ငါတို့သည်လည်းအနည်းငယ်ကျွန်ုပ်တို့၏သတ်မှတ်ချက်ကိုပြောင်းလဲရန်ဤအခ​​ွင့်အလမ်းကိုယူ, သင်သည်သင်၏ဘာသာပြန်ထားသောစာမျက်နှာများပေါ်တွင် AdSense ကိုမှ Google ကြော်ငြာများကိုပြသနေတဲ့နေလျှင်, ကျွန်တော်တို့ယူကြမည် 1/1000 ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် AdSense code တွေနှင့်အတူအသုံးပြုမှုအတွက်ကြောင့်အာကာသ၏, Transposh ဒေါ်လာ 10K ၏ဝင်ငွေကို generate ကိုကူညီမယ်ဆိုရင်ဒါသည်သင့်ကိုငါတို့ကော်ဖီဝယ်ယူလိမ့်မည်! ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတင်စကား! အမှုအရာအနည်းငယ်ရှင်းလင်းတင်ပြနိုင်ရန်, ငါတို့သည်သင်တို့၏စာမျက်နှာပေါ်အပိုဆောင်းကြော်ငြာအာကာသကိုမဖန်တီးကြပါ, ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်ကြော်ငြာများကိုထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ layout ကိုပြောင်းလဲပစ်မည်မဟုတ်, သင်သည်အဘယ်သူမျှမကြော်ငြာများကိုတွေ့ရှိပါက, ကျနော်တို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူး. သင်သည်ဤအလွန်အကျွံတောင်းသည်ဟုထင်နေလျှင်, သင်ရိုးရှင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ plugin ကိုပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်, ပျော့ပျောင်းတေးသွားကိုနှိုးဆော်, နှင့်သင်၏လမ်းခရီးတွင်ဖြစ်. သင်တဲ့စီးပွားဖြစ်ခွင့်လိုင်စင်ချင်တယ်ဆိုရင်, ကျွန်တော်တို့သေးသောသူတို့ကိုမရောင်းဘူး, ဒါပေမဲ့သူတို့ဖြစ်ကောင်းပိုမိုကုန်ကျပါလိမ့်မယ်.
Bing မှအဘို့အ Added အဘိဓါန် Catalan ဟိန္ဒူအထောက်အပံ့ – ကိုယ်တိုင်ကအဘို့အပြောတတ်၏.
dropdown widget ကတိုးတက်လာ css – တကယ်တော့အခုအများကြီးပိုကောင်းကြည့်.
memcache အတွက်ပံ့ပိုး – APC နှင့်အခြား opcode cache များကိုသင့်အဘို့အများလွန်းခဲ့လျှင်, ယခုသင် memcache ကိုအသုံးပြုကြပြီးပျော်စရာတွေအများကြီးရှိပေလိမ့်မည်.
သာ. ကောင်း၏ 404 စာမျက်နှာကိုင်တွယ်ခြင်း (Non-ရှိပြီးသားစာမျက်နှာများ၏အသစ် links တွေကိုမဖန်တီးဘူး) – ကို Google crawler နည်းပါးသင့် site hassle လိမ့်မည်ဟုအဓိပ္ပာယ်.
rackspace cloudsites အပေါ် cache လုပ် Fix – သူတို့က x-cache ကို opcode cache ကို install လုပ်ခဲ့, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမအသုံးပြုသူမှတ်ဉာဏ်နှင့်အတူ, သော logfiles မှာတစ်ဟုန်ထိုးစေ၏ – ယခု fixed.
အများစုကပိုပြီးအသေးအဖွဲပြင်ဆင်ခြင်း – အဲဒီရေတွက်စေခြင်းငှါ,, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အလုံအလောက်လက်ချောင်းစရာမလိုပါ.
အားဖြင့်တူရကီဘာသာပြန်စာပေ Semih Yeşilyurt.
ငါတို့သည်သင်တို့အဒီဗားရှင်းကိုမွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်, အဖြစ်အစဉ်အမြဲ, သင့်ရဲ့မှတ်ချက်တွေကိုစောင့်ဆိုင်း, စိတ်ကူးများ, အကြံပြုချက်များနှင့်မီးတောက်များ.
P.S – WordPress ကိုစမ်းသပ် 3.3 beta4, အလွန်ကြီးစွာသောအလုပ်ဖြစ်တယ်.
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ, Software ကို Updates ကို အတူ Tagged: အေဂျက်, Bing (MSN) ဘာသာပြန်သူ, bugfixes ပြင်ဆင်မှုများ, ဂူဂယ်လ်ဘာသာပြန်, လွှတ်ပေး, widget က, xcache
version 0.7.5 – အရှည်ကြာဆုံးနေ့ကို ++
ဇွန်လ 22, 2011 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 23 comments
အတွက်ပံ့ပိုး5ပို Indicator ဘာသာစကားများ
နွေရာသီပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်တရားဝင်မြောက်ကမ္ဘာခြမ်းတွင်စတင်နေပါပြီ, ကျွန်တော် version ကိုတင်ဆက်ဖို့ဂုဏ်ယူကြသည် 0.7.5 ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဲ့ plugin. ဒီဗားရှင်းကိုထောက်ခံအဖြစ် Translate Google ကယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြကြောင်းအသစ်ဘာသာစကားတွေအတွက်အထောက်အပံ့ကထပ်ပြောသည် – ဘင်္ဂါလီ, အဘိဓါန် Gujarati, ကန်နာဒါ, အဘိဓါန် Tamil နှင့်အဘိဓါန် Telugu.
သင့်ဘလော့ဂ်ကိုထိုဘာသာစကားများကိုထည့်သွင်းဖို့တဟုန်တည်းပြေးခြင်းမပြုမီ, သူတို့အားဘာသာစကားများကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်တစ်ဦး Ajax ကို proxy ကိုအသုံးပြုသတိပေးခံရကျေးဇူးပြုပြီး, သောသူတို့သည်တစ်ဦးဘာသာပြန်ချက်အသစ်ကို string ကိုပထမဦးဆုံးဆုံတွေ့ပေါ်မှာသင်တို့ server ပေါ်မှာဝန်ကိုဖန်တီးသည်ဟုဆိုလိုသည် (Google ထံမှဘာသာပြန်တဲ့ဆွဲယူဖို့အတင်းအကျပ်). ဒါကြောင့်ရွေးချယ်မှုသင်တို့ဥစ္စာဖြစ်၏, သင်မူကား, တိုင်ကြားမည်ပါပြီ…
ထို့ပြင် ပို. ဒီဗားရှင်း Transposh ရဲ့ default ဘာသာစကားနှင့်အတူ default အနေနဲ့ဒေသခံ override ငှါမကထို option ကိုထပ်ဖြည့်, ဒီအမူအကျင့် (အသစ် 0.7.4) MU ကိုအသုံးပြုသူများကသူတို့ဘာသာစကားမှာ admin ရဲ့စာမျက်နှာများရှိသည်ခွင့်ပြု, ဒါပေမယ့်အခြားတဖက်မှာမိမိတို့ကို default ထက်ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားတစ်ခုအတွက် site ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်စေချင်ကြောင်းအသုံးပြုသူများမကောင်း, ဒါကြောင့်ယခု Configure လုပ်လို့ဖြစ်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘာသာပြန်ချက် UI ကိုစတိုးတက်လာကြပါပြီ, လာမည့်နဲ့ previous ခလုတ်ယခုပြုသောအမှုပြောင်းလဲမှုများကို save, နှင့်ဒိုင်ယာလော့ခ်အဲဒီခလုတ်ကိုနှိပ်အပေါ်သို့ re-ဗဟိုပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ.
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: 0.7, ဂူဂယ်လ်ဘာသာပြန်, အသေးအဖွဲ, ပိုဘာသာစကားများ, လွှတ်ပေး, UI, wordpress မှာ plugin
version 0.6.7 – လာမယ့်ဆိုတာဘာလဲ?
ဒီဇင်ဘာလ 18, 2010 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 23 comments
မနေ့ကကျွန်တော် version ကိုဖြန့်ချိခဲ့ကြ 0.6.7. ဒီဗားရှင်းတစ်ဦးအနည်းအသေးအဖွဲပြင်ဆင်ခြင်းများပါဝင်သည်, နှစ်ဦးစလုံး google မှာမှန်မှန်ကန်ကန်အရင်းအမြစ်ဘာသာစကား detect မပိုတိုများပြန်ဆိုနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကို, နှင့် static နဲ့ဖိုင်များကိုတိုက်ရိုက်လင့်ခ်ကိုထည့်သွင်းရန်စွမ်းရည်ကို (သူတို့သည်စေမည် 301 ပေါ်ပေါက်ဖို့ redirect).
သို့သော်အဘယ်အရာကိုပိုအရေးကြီးတယ်နောက်ဆုံး cleanup ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်များနိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်, နှင့် Transposh ၏နောက်အဓိက version အတွက်အပြည့်အဝရွေ့လျားမှုအတွက်ကိရိယာများထား – အရာဖြစ်လိမ့်မည် 0.7. ဒီဗားရှင်း၏အာရုံကိုဘာသာပြန်တဲ့ frontend interface ကိုအဓိကတိုးတက်မှုဖြစ်လိမ့်မည်, ကျနော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကွန်ရက်စာမျက်နှာကဒီအွန်လိုင်းများအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုသွင်းထားပြီ http://trac.transposh.org/wiki/milestones/0.7. လာမည့်ဗားရှင်းကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့လိုလားကြောင်းလူတိုင်းတည်းဖြတ်ကြောင်းဝီကီစာမျက်နှာပေါ်တွင်မှတ်ချက်ပေးရန်သို့မဟုတ်သည်ငါတို့အဘို့လက်မှတ်ကိုဖန်တီးရန်ကြိုဆို. ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီတောင်းဆိုမှုအားပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်အချိန်ဇယားကိုထဲသို့ fit ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်.
အချို့သောအခြားသတင်းတွင်, ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် Colnect, မျှော်လင့်ခြင်း site ကိုနည်းနည်းပိုမြန်သွားစေပါလိမ့်မည် Transposh သစ်တခု VPS ကူညီထောက်ပံ့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အသစ်ကိုကမကထပြုသူ. ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတိုးတက်စေရန် cloudflare ကိုအသုံးပြုဖို့ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြ, သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရောထွေးရလဒ်တွေကြရသည်, ထို့ကြောင့်သင်သည်ဤ site ကိုကြည့်ရှုခွင့်မည်သည့်ပြဿနာမျှမရှိဘဲနေလျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုသိစေကျေးဇူးပြုပြီး.
အစီအစဉ်အပေါ်လွန်ခဲ့သည့်, ဘလော့ဂါအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ plugin ကိုတစ်ဦးမှ alpha version ကိုအမှုတော်တို့ကိုပေါ်, သင်ဘလော့ဂါတစ်ယောက်အပေါ် site တစ်ခုရှိသည်နှင့်၎င်းကိုဘာသာပြန်ချက်ထည့်ချင်လျှင်, ကျွန်တော်တို့ကို့ကိုဆက်သွယ်ပါ.
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ, Software ကို Updates ကို အတူ Tagged: 0.7, ဘလော့ဂါ, ဂူဂယ်လ်ဘာသာပြန်, ဗိုလ်မှူး, အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး, trac, wordpress မှာ plugin